Akụkọ - Ọrụ nke gearbox
Gearbox A na-ejikarị ya, dị ka igwe ikuku, gearbox bụ ihe dị mkpa dị mkpa nke ikuku ikuku. Ọrụ ya bụ ibunye ike ikuku na-ebugharị n'okpuru ọrụ nke ike ikuku na generator ma mee ka ọ nweta ọsọ na-agba ọsọ.
Ọtụtụ mgbe, ọsọ na-agba ọsọ nke ikuku ikuku dị obere, nke dị anya na ntụgharị ọsọ nke generator chọrọ maka ike ọgbọ. Ekwesiri ighota ya site na mmetuta nke uzo nke gearbox, ya mere a na-akpo igbe na-abawanye.
Gearbox na-ebu ike site na ikuku ikuku na ikike mmeghachi omume nke na-eme n'oge nnyefe gia, ọ ga-enwerịrị oke ike iji buru ike na oge iji gbochie nrụrụ ma hụ na nnyefe ahụ dị mma. A ga-eme atụmatụ nke gearbox ahụ dịka ndokwa nhazi, nhazi na ọnọdụ mgbakọ, mma maka nyocha na ndozi nke nnyefe ike nke ikuku generator.
Gearbox nwere ọrụ ndị a:
1. A na-akpọkarị osooso na ngbanwe ọsọ ọsọ gearboxes na-agbanwe agbanwe.
2. Gbanwee uzo mbufe. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike iji ngwa ọrụ abụọ na-ebugharị n'ike n'ụzọ ọzọ na ntụgharị ọzọ.
3. Gbanwee torque na-agbanwe agbanwe. N'okpuru otu ọnọdụ ike ahụ, ngwa ngwa ngwa ahụ na-agbagharị, obere ihe ahụ dị na osisi ahụ, na ntụgharị.
4. Clutch function: Anyị nwere ike ikewapụ engine na ibu site na nkewa abụọ mbụ meshed Kwadobe. Dị ka brek ipigide, wdg
5. Kesaa ike. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike iji otu injinị na-ebugharị ọtụtụ osisi ohu site na isi osisi gearbox, wee si otú ahụ mata ọrụ nke otu injin na-anya ọtụtụ ibu.
E jiri ya tụnyere igbe ndị ọzọ na-emepụta ihe, n'ihi na a na-etinye gearbox ike ikuku n'ime ụlọ dị warara dị mita iri ma ọ bụ karịa karịa 100 mita n'elu ala, olu ya na ịdị arọ ya nwere mmetụta dị mkpa na igwe injin, ụlọ elu, ntọala, oke ikuku unit, echichi na mmezi na-eri, Ya mere, ọ dị mkpa iji belata mkpokọta size na ibu; Na usoro nhazi zuru oke, a ga-atụle atụmatụ nnyefe ma bulie ya na oke olu na ịdị arọ dị ntakịrị dị ka ebumnuche na ebumnuche nke iru ihe ntụkwasị obi na ndụ ọrụ; Ọdịdị nhazi ahụ kwesịrị ịdabere na mbido nzute ike nnyefe na mgbochi ohere, ma tụlee usoro dị mfe, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ndozi dị mma ruo otu o kwere mee; Ekwesịrị ịkwado ogo ngwaahịa na njikọ ọ bụla nke usoro nrụpụta; N'oge ọrụ, ọnọdụ na-agba ọsọ nke gearbox (na-ebu ọnọdụ okpomọkụ, ịma jijiji, ọnọdụ mmanụ na mgbanwe dị mma, wdg) ga-enyocha ya n'oge ma na mmezi kwa ụbọchị ga-arụ dịka nkọwa.
Post oge: Jun-16-2021